Xagaaga Sounds, ururinta ciida Springfield | Bezzia
Maria vazquez | 11/05/2022 18:00 | Maxaan xirtaa
Ma waxaad u socotaa mid ka mid ah xafladaha muusikada taas oo lagu qaban doono xagaaga dalkeena? Hadday sidaas tahay, dharka ciida taasi Springfield waxay ku siinaysaa tifaftirka dhawaqeeda xagaaga cusub, waxay noqon kartaa beddel fiican oo si xor ah oo raaxo leh ugu wareego. Soo hel ururinta xaflada Springfield!
Atariishada Begona Vargas iyo kooxda Hinds-ka ayaa sawirkooda ku siinaya ololahan cusub ee shirkadda kaas oo ay door weyn ka ciyaaraan dharka daabacan, dharka denimka iyo dusha sare ee la jarjaray. Dhar khafiif ah oo midab leh oo kugu martiqaadaya inaad madadaalo leedahay.
Shirkaddu waxay awooday inay dib u abuurto ololahan taas Dareen xorriyad iyo sidoo kale madadaalo aan la xiriirno ciidaha muusiga. Waxay sidaas ku samaysay xaalado iyo waxyaabo gaar ah sida labbiska: dhallinyaro, cusub, iyo taabashada hippie ee had iyo jeer ka shaqeysa xaaladahan.
Furayaasha Dhawaaqyada Xagaaga
Dharka qaabaysan Kaalin weyn ayay ku leeyihiin ururintan. Waxay leeyihiin maydh malab ah, qaansooyin ku dhejisyada, ruffles marada ... faahfaahinta iyaga siinaya cusub iyo dhaqdhaqaaqa. Midis gaaban ama midis ayaa lagu daraa kabo siman iyo kabo cowboy ah.
Crochet waa fure kale oo ururintan dabbaaldegyada Springfield. Dusha sare ee suunka, oo leh qoorta labajibbaaran iyo ubaxyo crochet ah oo midabada daboolka ah, ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah qaybaha soo jiidanaya dareenka ugu badan ee ururintan, laakiin ma aha midka kaliya, maadaama aad heli doonto wakhti aad ku xaqiijiso.
Iyada oo ay la socdaan korka sare ee crochet, the daabacaadda ubaxa ee kore. Kuwaas waxaa lagu daraa dharka denimka: surwaal, dhar gaaban iyo gaaban. In kasta oo aad sidoo kale sharad ku geli karto shaarar ama shaati iyo jaakad. Waxayna tahay in jaakadaha leh daabacaadda qowmiyadeed ay tahay mid kale oo ka mid ah soo jeedinta Springfield ee xafladaha soo socda.
Ma jeceshahay soo jeedinta ururinta ciida Springfield?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Xagaaga Sounds, ururinta ciida Springfield